Akora fanamboarana savony Hakarina 100% ny hetra alaina aminy
Anatin’ny volavolan-dalàna momba ny tetibolam-panjakana 2020 (PLF 2020),
dia nakarina 100% ny tahan’ny haban-tseranana ho an’ireo manafatra ny akora fototra ilaina amin’ny fanamboarana ny savony na ihany koa ny « bondillon ». 10% io taha io amin’izao fotoana dia lasa 20% anatin’ny PLF 2020 (takila faha 20). Fanampiana io sehatry ny orinasa mpanamboatra savony io no anton’ny nahatonga ny fitondram-panjakana nampiakatra io taha io raha ny voasoratra. Miady amin’ny fiakaran’ny vidin’entana ilaina amin’ny andavanandro ny fitondram-panjakana anefa tsy azo lavina fa hisy fiantraikany be amin’ny vidin-tsavony io fampiakarana io, satria maro ireo orinasa mpanao savony no manafatra avy any ivelany io « bondillon » io. Anisan’ny voa mafy amin’izany ireo vahoaka madinika izay manjifa ny vokatra azo avy aminy. Mazava ny lalana 2017/047 momba ny fampiroboroboroana ny indostria eto Madagasikara ( LDIM) izay mamaritra mazava tsara fa « raisina ho anisan’ny indostria ireo hetsika ara ekonomika manodina akora fototra na akora natoraly efa nahodina na tsia ahazoana vokatra manontolo na amin’ny ampahany ka amidy eo amin’ny tsena anatiny na any ivelany ». Manahy be ireo mpandraharaha amin’ity sehatra ity fa tsy fahazakana fifaninanana ara-barotra no anton’izao. Efa nisy tokoa mantsy fanapahan-kevitra fampiakarana ny tahan’ny fanafarana ity akora fototra ity izay avy amin’ny ANMCC teo aloha fa nihantona izany. Tsara homarihina fa ampiasaina any amin'ireo indostria mamokatra savony eo anivon'ny Comesa misy an’i Madagasikara io “bondillon” io Ka 0% ny haba, izany hoe tsy misy. Handalo eny anivon’ny antenimiera roa tonta ity volavolandalana ity (PLF 2020) ka heverina fa handinika ny mety ho vokany ireo olom-boafidy, indrindra fa ny solombavambahoaka.